Marwada Koowaad Ee Somaliland Oo Kombuyuutaro Ugu Deeqday Dugsiga Dhegooleyaasha Burco | Saxil News Network
Marwada Koowaad Ee Somaliland Oo Kombuyuutaro Ugu Deeqday Dugsiga Dhegooleyaasha Burco
Marwada koowaad ee Somaliland, Marwo Aamina Sheekh Maxamed Jirde ayaa shalay gudoon-siisay dugsiga dhegoolayaasha ee Burco 30 Laptop iyo hal Printer, oo ay ugu tallo-gashay in ay ka caawiso dhinaca waxbarashada, caruurtaasi dhegaha la’a.
Guddida dugsiga Dhegoolayaasha Burco ayaa marwada koowaad uga mahad celiyay deeqdan oo ay ku tilmaameen mid waxtar leh oo ay ka faa’iidaysan doonaan qalabkan oo ay xuseen inay baahi weyn u qabeen.
Guddida ardayda Dhegooleyaashu waxay sheegeen inay wadeen qorshe dugsi gaar ah loogu dhisayo dhegooleyaasha Burco, waxaanay tilmaameen in dhismaha dugsigaasi lagu qiimeeyay konton kun oo Dollar, oo labaatan kun oo ka mid ah ay Ganacsatada gobolka Togdheer balan-qaadeen inay bixinayaan.
Waxay Guddidu ammaantay xukuumadda Somaliland oo xafladaasi ka balan qaaday inay bixin doonto 30 kun ee Dollar ee ka dhiman dhismaha dugsiga ay doonayaan inay u bineeyaan dhegooleyaasha Burco.
Ardayda Dugsiga dhegooleyaashu waxay shahaado sharaf ku maamuuseen Marwada koowaad ee Somaliland Marwo Aamina Waris Sh. Maxamed Jirde oo ay sheegeen inay ku mutaysatay dhiirigelinta iyo wax-qabadka ay la garab taagan tahay dugsigooda.
Marwo Aamina Waris ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay heerka waxbarashada ardayda dhegooleyaasha Burco marayso, waxaanay balan-qaaday inay mar walba garab taagnaan doonto sidii ay wax ula qaban lahayd.
Marwada Koowaad waxa kale oo ay kormeer ku soo martay xarunta dugsiga agoomaha ee magaaladda Burco oo ay soo indho-indhaysay dugsi weyn oo loo dhisayo.